AKHRISO muxuu ku jawaabay markii Ra`isul wasaaraha Itobia la weydiiyey Arinta Qalbi dhagax iyo Walaac…. | SOMALI SUN |
AKHRISO muxuu ku jawaabay markii Ra`isul wasaaraha Itobia la weydiiyey Arinta Qalbi dhagax iyo Walaac….
Weriye: Mudane Ra’iisal Wasaare, waxaa jira warar saameyn ku yeeshay shacabka Soomaaliya oo sheegaya in sarkaal ka tirsan ONLF, oo la dhaho Cabdikariim Sheekh Muuse, ay dawladda Soomaaliya idiin soo dhiibtay. Arrintaas ma noo xaqiijin kartaa?
Desalegn: haa, arrintaasi way jirtaa. Wuxuu ahaa shakhsi Itoobiyaan ah, oo ku dhashay Itoobiya, in kasta oo waqtiyadiisa qaar uu ku noolaa Soomaaliya. Wuxuuna ku hawlanaa dhibaataynta dalkiisa iyo Soomaaliya laftigeeda.
Weriye: Ma waxaa jira heshiis idiin dhexeeya idinka iyo Soomaaliya oo dhigaya in xubnaha ONLF la idiin soo gacangeliyo?
Desalegn: dawladda Soomaaliya ee hadda jirta iyo saddexdii dawladood ee ka horeeyey waxaan la ahayn iskaashi wanaagsan iyo wadashaqayn ku salaysan amniga iyo masaalixda labada dal. Itoobiyana markasta waxay ahayd cidda taageerada ugu badan siisa dawladda Soomaaliya. Waad ogtay, dawladda soomaaliya waxay Villa Soomaaliya (madaxtooyada Muqdisho) ku fariisatay naf huridda Itoobiya. Taas ayaa suurtagal ka dhigtay in labo madaxweyne lagu doorto Muqdisho. Itoobiya waxay ka mid tahay AMISOM oo ah cidda keliya ee mas’uulka ka ah amniga dawladda Soomaaliya. Taas waxaa dheer, waxaa jira ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ku jirin Amisom oo ka hawl gala gobolada Galguduud, Hiiraan, Bay, Bakool iyo Gedo, kuwaaso oo si joogto ah u difaaca maamulada meelahaas ka jira iyo shacabka ku nool. Marka aan hurayno qiimo intaas le’eg, suurtagal ma noqonayso in dawladda Soomaaliya ay martigeliso Jabhad argagaxiso ah oo Itoobiya kusoo duulaysa.
Weriye: Waxaad sheegtay in aad si xoog leh u difaacaysaan dawladnimada soomaaliya, Yaad ka difaacaysaan?
Desalegn: dawladnimada Soomaaliya waxaan ka difaacaynaa kooxo soomaali ah iyo argagaxiso caalami ah. Taas ha la yaabin, qaranimada soomaaliya waxaa muddo dheer hortaagnaa kooxo si qabiil ah u abaabulan iyo kuwo kale oo qadyado kale ku midaysan.
Weriye: waxaad ONLF ku sheegtay argagaxiso, laakiin UN-ka iyo dawladaha reer galbeedku uma yaqaanaan argagaxiso, xubnaha ururkaasi wuxuu ka hawl galaa dawlado badan oo ay ku jiraan Mareykanka iyo kuwa reer Yurub, idiin mana soo dhiibaan, arrintaas sidee ugu qiil dayeysaa?
Desalegn: Laga soo bilaabo 2011-kii markaas oo baarlamaanka Itoobiya meel mariyey sharci ONLF ka dhigaya argagaxiso, siyaasadayada arrimaha debeddu waxay ku salaysnayd mabda’aas. Iskaashiga aan dal kale la yeelanayno arrintaasi waa ka qayb. Iskaashiga naga dhexeeya annaga iyo Soomaaliya waa noocaas. Dalalka kale ee aad sheegtay, qaarkood naga ma dhexeeyo heshiis laba dhinac ah sida Soomaaliya. Intooda badan, saameyn amni oo toos ahna dalkayaga kuma yeelan karaan sida Soomaaliya. Balse waxaa jirta dawladda Ereteriya oo iyadu diiday in ay ixtiraamto wax heshiis ah heer kasta ha ahaadee.
Weriye: Soomaalidu waxay aaminsan tahay in aad dhulkeeda qayb gumaysataan, sidaa awgeed, ONLF ay tahay urur gobonimo u dirir ah, taas maxaad ka oranaysaa?
Desalegn: waxaa jiray fikir ay qabtay dawladdii Siyaad Barre, iyo dabcan kuwii kasii horeeyey, oo khaldanaa. Taasoo ay ku sheeganaysay dhulal ka mid ah Itoobiya iyo Kenya. Annagu fikirkaas si nabdoon ayaan ku wajahnay. Waad ogtahay, waxaa jiray ururo ka hor yimi cadaadiskii dawladdaas kacaanka ahayd, oo Itoobiya kaalmo waydiisan jiray sida SNM, SSDF, SPM iyo USC, dhammaantood waxay Itoobiya kula heshiiyeen in aysan aqoonsanayn sheegashada dawladda Soomaaliya ee dhulka Itoobiya.
Weriye: laakiin, aan kaa dhex galee, ma jirto Jabhad ka mid ah kuwaas oo talada dalka Soomaaliya la wareegtay, oo aad heshiiskaas maanta u qabsan kartaan?
Desalegn: waa sax laakiin siyaasadda Soomaaliya waxaa hor boodaya maanta madaxdii Jabhadahaas ama taageerayaashoodi. Waxaan kuu raacin lahaa, xukuumadaha Soomaaliya waqtigan isaga danbeeyeyna mabda’aas waa qabaan. Marka aan ku fahamsiiyo, iyada oo midnimada Itoobiya iyo deris wanaagga ay Soomaaliya dhowrayso, iyada oo Soomaaliya aysan ka maarmi karin iskaashigayaga, marnaba ma marti gelin karto ONLF iyo cid kasta oo dhibaato nagu ah.
Weriye: Soomaalidu waxay qabtaa in mushkiladda haysata aad idinku qayb ka tihiin oo doorkiinnu yahay mid aad iyaga ku gacan-togaalaynaysaan, ka waran aragtidaas?
Desalegn: Soomaalidu iyagaa ku heesa “ Ummad waliba aayaheeda in ay ka taliso iyadaa leh”. Shaqo iyaga u taal cid kale lagu ma eedeyn karo, laga mana sugi karo. Waxa meesha yaal waa dib u soo celinta qarankii Soomaaliya. Itoobiya waxay xubin muhiim ah ka tahay ururka IGAD, waxay marti gelisaa ururka Midowga Afrika, waxay xubin ka tahay Golaha Ammaanka ee UN-ka, intaasba waxay u leedahay galaangal aysan Soomaaliya ku lahayn, waxayna miis kasta gaysaa wax Soomaaliya dan u ah siyaasad ahaan. Waxaan muddo badan haynay culayska qaaxooti soomaali ah oo gaaraya rubuc malyuun qof. Waana kuu sheegay ciidan ahaan sida aan ugu naf hurray Soomaaliya.
Weriye: ma kula tahay in rajada Soomaaliya sidii hore kasoo wanaagsanaanayso?
Desalegn: taasi waxay ku xiran tahay dadaalka ay soomaalidu la timaado iyo waxa ka suurtageli kara. Soomaalidu si fudud ayey wax badan ku qaban karaan, si fududna wax badan ayey ku burburin karaan, marka waxa dhinacooda ka suurtageli kara ma garan karo. Runtiina waa dad wanaagsan. Laakiin, beesha caalamka waxaa ka go’an dib u soo celinta qaranka soomaaliya. Dadaalka beesha caalamka ee Soomaaliya ku wajahan waxaa hoggaamiya Itoobiya, oo dawladaha waaweyn uga danbeeyaan. Waayo, cid Itoobiya arrimaha soomaaliya uga fara dhuudhuuban ma jirto. Annaguna waxaan ixtiraamaynaa rabitaanka Soomaalida.
Weriye: Soomaali ayaa qabanqaabinaysa mudaharaaddo ay ka dhigaan safaaradihiina debedda, arrinka Cabdikariim awgiis?
Desalegn: waxaan kula talinayaa soomaalidaas qaaxootiga ah in ay ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda u nabdayn la haayeen, oo iyagu u heshiin la haayeen. Annagu waan jecel nahay qaaxootiga faraha badan ee aan hayno in ay dalkooda soomaaliya dib ugu noqdaan. Waan jecel nahay in aan aragno ciidamo soomaaliyeed oo shaqada ciidamadayada kala wareega. Taas in la garto ayaa muhiim ah.
Weriye: Itoobiya dhexdeeda waxa ka jira dhibaatooyin, maxaad nooga sheegi kartaa?
Desalegn: Itoobiya xaaladeedu waxay maraysaa meeshi ugu wanaagsanayd. Waxaan ka mid noqonay dalalka ugu dhaqaale kororka fiican Africa. Waxaan dhisnay ciidamada ugu xoogga badan Bariga Afrika. Waxaan door muhiim ah ka qaadannay siyaasadda Caalamka. Mashaariic waawayn ayaan hirgelinay qaarna wadnaa, sida mashaariicda khadadka tareennada, kuwa korontada, kuwa beeraha iyo kuwa warshadaynta dalka. Waxaan higsanaynaa is-ku-filnaansho.
Weriye: Maxaad u qarinaysaa rabshadaha qoomiyadaha ku salaysan iyo caburinta saxaafadda?
Desalegn: kkkkk fannaan Itoobiyaan ah ayaa ku heesa “Itoobiya ha is raamsato oo ha is raacdo”, heestaas miyaad dhegaysataa? Taasi waa been!!!